राम मन्दिर राजनीतिको गर्मागर्मी
scheduleबुधवार मंसिर १७ गते, २०७७
राम मन्दिर राजनीतिको मुद्दाले फेरि एकपटक गर्मागर्मी शुरु गरेको छ । राम मन्दिर एउटा यस्तो मुद्दा जसले भारतीय राजनीतिलाई पूरै बद्लिदियो । यो मुद्दाले सन् १९८२ मा २ सिट पाएको भाजपालाई सन् २०१४ मा २८२ सिट दिलायो ।
यही मुद्दाले अटलविहारी बाजपेयीलाई प्रधानमन्त्री बनायो । यही मुद्दाले अहिले नरेन्द्र्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री छन् । आज भाजपासँग बहुमत छ । हामी उनीहरुको विचारधारासँग सहमत वा असहमत हुन सक्दछौं, त्यो भिन्नै कुरा । तर, यो सत्य सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । यदि यो राम मन्दिरको मुद्दा हुँदैनथ्यो भने आज भाजपा जहाँ छ, त्यहाँ हुन कुनै हालतमा सम्भव थिएन ।
अगष्ट ५ मा अयोध्यामा त्यही राम मन्दिरको शिलान्यास हुँदैछ । यो क्षण केवल भाजपाको लागि मात्र हैन, सिंगो देशकै लागि एक ऐतिहासिक क्षण हुनेछ । यो क्षणलाई हरेक भारतीय आफ्नो आँखाले हेर्न चाहन्छन् । यही करणले यसको राष्ट्रिय प्रसारण दूरदर्शनबाट गरिने भएको छ ।
यसबारे धेरैको आपत्ति पनि छ । तर, आजको मेरो बिषय त्यस्तो आपत्ति हैन । यहाँ राम मन्दिर र यसको निहुँमा भएको राजनीतिबारे चर्चा गरिने छ ।
राम मन्दिरको मुद्दाले भाजपालाई शक्तिमा ल्याएको मात्र छैन, देशकै ठूलो पुरानो तथा ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेसलाई खस्ताहालमा पुर्याएको छ । आज कांग्रेसको संसदमा ५० सीट पनि छैन । यसको एउटा ठूलो कारण राम मन्दिर नै हो । कांग्रेस कहिल्यै यो मुद्दामा प्रष्ट हुन सकेन । कांग्रेसले राम मन्दिरको मुद्दामा आफ्नो भनाई नै प्रष्ट पार्न सकेन ।
कांग्रेसले अयोध्यामा राम मन्दिर बन्नुपर्छ कि पर्दैन, भन्न सकेन । त्यसले उसको भोटको ठूलो हिस्सा काग्रेसबाट विमुुख हुुँदै गयो । देशको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा कांग्रेसबाट टाढिन थाल्यो । हिन्दू जनमतबारे मौन बसेर आज कांग्रेसलाई आफ्नो राजनीतिक भबिष्य खोज्न निक्कै गाह्रो भइरहेको छ ।
आज कांग्रेस देशको हिन्दु जनमतलाई नयाँ ढंगले आफूतिर आकर्षित गर्न चाहन्छ । तर त्यसको ठीक बुझाई वा रणनीति के हुन्छ भन्ने बारेमा भ्रमहरु छन् । कांग्रेस यो ठान्दछ कि राम मन्दिर आन्दोलन र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच कुनै सिधा सम्बन्ध छैन । मोदी राम मन्दिर आन्दोलनको फ्रन्टलाइनमा थिएनन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको ६ वर्षमा एकपटक पनि अयोध्या पूजा गर्न गएनन् ।
जतिखेर राम मन्दिर आन्दोलनको लहर उत्कर्षमा थियो– त्यतिखेर लालकृष्ण अडवानीलाई ‘हिन्दू हृदयका सम्राट’ भनिन्थ्यो । अड्वानी आन्दोलनका अग्रणी नेता थिए । त्यसबाहेक मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितम्बरा, विनय कटियार, अशोक सिंगल, मोरुपद पिंगले आदि त्यो आन्दोलनको नेता मानिन्थ्ये ।
यो सूची अझै लामो बनाउन सकिन्छ । तर जति नै लामो बनाए पनि त्यहाँ नरेन्द्र मोदीको नाम भेटिदैन । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जब लालकृष्ण आडवानीले गुजरातबाट रथयात्रा शुरुवात गरेका थिए, त्यसको मुख्य व्यवस्थापक तथा प्रबन्धकर्ता भने नरेन्द्र मोदी थिए । रथयात्राको कल्पना, रणनीति र योजना आरएसएसले बनाएको थियो । त्यसलाई भाजपामार्फत् लागू गरिएको थियो ।
कांग्रेसकोे यो सोच ठीकै हो कि मोदी फ्रन्टलाइनमा थिएनन् । साथै यो पनि उत्तिकै सहीको कि मोदीले राम मन्दिरबारे कुनै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएनन् । अर्को यथार्थ के हो भने जब भाजपामा मोदीको उदय भयो, उनले राम मन्दिर आन्दोलनका नेताहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै किराना गरे ।
अड्वानी र जोशीलाई मार्गदर्शक मण्डलमा सीमित गरियो । उमा भारती राम मन्दिर आन्दोलनकी अर्की चर्चित नेतृ थिइन्, केही समय उनी मोदी सरकारको मन्त्री रहिन्, आज कहाँ छिन् कसैलाई थाहा छैन । विनय कटियार पूरै गायव छन् ।
ती सबै व्यक्ति जो राम मन्दिर आन्दोलनका अग्रमोर्चाका नेता थिए, आज भाजपा राजनीतिबाट गायब जस्तै छन् । मोदी प्रधानमन्त्री भएसँगै उनीहरु किनारामा धकेलिएका छन् । यसको रहस्य पनि कांग्रेसले ठीक ढंगले ठम्याउन सकिरहेको छैन ।
अर्को कुरा– जब सन् २०१९ मा संसदकोे चुनाव हुनेवाला थियो, त्यसअघि केही प्रदेशहरुको विधानसभा निर्वाचन थियो । त्यो समय आरएसएस र भाजपाबाटै राम मन्दिरबारे संसदमा विशेष विल पास गर्न मोदीमाथि दबाब थियो । त्यतिखेर उनले जबसम्म सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदैन, यसबारे बोल्नु हुँदैन भनेर सबैैलाई विश्वासमा लिएका थिए ।
कांग्रेसमा यसबारेको चिन्ता आजको हैन । लामो समयदेखि कांग्रेसमा यो धारणा थियो कि जब बाबरी मस्जिद ढल्यो, तब हिन्दू मात्र हैन, मुस्लिम भोट पनि कांग्रेसबाट टाढा थियो । त्यतिखेर कांग्रेसको सरकार थियो । पीवी नरसिम्ह राव प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री रावको सरकारले त्यो घटना रोक्न राम्रो पहल नगरेको कांग्रेसको बुझाई रह्योे । त्यही कारण थियो पदबाट हटेपछि रावलाई काँग्रेसले राम्ररी सम्झिएन ।
रावमाथि आरोप थियो कि जब बाबरी मस्जिद ढल्दै थियो राव आफ्नो कोठामा मस्त सुतेका थिए । रावलाई कांग्रेससँग जोडेर गरिने स्मरणले कांग्रेसको छवि झनै बिग्रने कांगेसीहरुको डर थियो । कांग्रेसले अझै पनि रावलाई राम्ररी सम्झिदैन । त्यति इज्जत दिँदैन, जति इज्जतको हकदार उनी हुन । रावले आफ्नो किताबमा आफूबारे कांग्रेसको सोचलाई आफै चित्रण गरेका छन । उनले भनेका छन्, ‘बाबरी मस्जिद काण्ड र त्यसबारे मेरो सरकारको भूमिकाले कांग्रेसलाई फाइदा भयो वा बेफाइदा भयो त्योे इतिहासले नै मूल्यांकन गर्ला ।’
आज राव छैनन् । तर कांग्रेसले उनको स्मरण शुरुवात गरेको छ । तर रावले शुरुवात गरेको आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमको २९ औं वर्षगाँठमा तेलङगानामा भएको एक कार्यक्रमका लागि सोनिया गान्धीले रावको प्रसंशा गर्दै प्रदेश अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डीलाई पत्र लेखिन् । यसले कांग्रेसमा आएको परिवर्तनको संकेत गर्दछ । राव मर्दा कांग्रेस उनको दाहसंस्कार समेत दिल्लीमा नभएर हैदरावादमा होस् भन्ने चाहन्थ्यो ।
कांग्रेसले लामो समयसम्म यो दाबी गर्दै आयो कि राम मन्दिरको इतिहासमा कांग्रेसको भूमिका कम छैन । वरिष्ठ हेमन्त शर्माको एक किताब छ– युद्धमा अयोध्या । राम मन्दिरको इतिहास र संघर्ष बुझ्न यो निक्कै राम्रो किताब छ । यसको पेज १८ मा हेमन्त शर्माले त्यही लेखेका छन्, जो आज कांग्रेसी नेताहरु सोच्दछन् । शर्मा लेख्छन्, ‘यो धारणा गलत हो कि राम मन्दिर निर्माणका लागि भजपा वा जनसंघले मात्र यो लडाईं लड्यो । यो पूरै विवाद र आन्दोलनको पछाडि कांग्रेस बलिया गरी उभिएको छ ।’
शर्मा अगाडि लेख्छन्, ‘राम मन्दिर विवादको पछिल्लो श्रृंखला सन् १९४९ डिसेम्बर २३ को रातबाट शुरुवात भयो । त्यो रात विवादित स्थलमा मूर्ति प्रकट भयो वा गराइयो । सँगसँगै धार्मिक तथा साम्प्रदायिक लहरको वेग बग्न थाल्यो । मानिसले त्यहाँ पुजा गर्न थाले । त्यतिखेरै कांग्रेसका मुख्यमन्त्री गोविन्दबल्लभ पन्तले त्यो वेग सामु घुँडा टेके । सन् १९८६ मा प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको इच्छाले नै मन्दिरको ताला खोलिएको थियो । सन् १९८९ मा राजीव गान्धी सरकारका गृहमन्त्री बुटा सिंह र मुख्यमन्त्री नारायणदत्त त्रिपाठीले नै मन्दिरको शिलान्यास गरेका थिए ।’
यो वर्षको चुनावी अभियानको शुरुवात राजिब गान्धीले अयोध्याबाट नै गरेका थिए । यसले प्रष्ट पार्दछ कि कांग्रेस मन्दिरकै पक्षमा थियो । स्वतन्त्रताकै समयदेखि कांग्रेस मन्दिर पक्षधर पार्टीको रुपमा थियो । त्योे समय जनसंघ वा भाजपा खासै दृष्यमा थिएन । र त्यसपछि यस्ता क्षणहरु आए यो मुद्दा भाजपाले कांग्रेसबाट खोस्यो । सन् १९९२ मा जब बाबरी मस्दिज ढल्यो, त्यतिखेर कांंग्रेस कै सरकार थियो । कांग्रेस सरकारले मस्जिद नढलोस् भनेर कुनै कडा सुरक्षा कार्बाही गरेन ।
आज कांग्रेसकै एउटा समूहले यी तथ्यहरु उजागर गरिरहेको छ । उनीहरु भन्दैछन् कि मन्दिरको जस किन भाजपलालाई मात्र दिने ? अझ कतिपयको यो भनाई छ कि राहुल गान्धी र उद्धव ठाकरेले अयोध्याको एक संयुक्त यात्रा गरी राम मन्दिर स्थलको दर्शन र पुजा गर्नु राम्रो हुन्छ ।
गत गुजरात विधानसभा निर्वाचन ताका राहुलले आफूलाई हिन्दू देखाउन नयाँरुपमा प्रकट भए । उनी जनै देखाउँदै मन्दिर मन्दिर पुजा गर्न गए । उनले आफूलाई हिन्दू ब्राह्मण सावित गर्न खोजे । हिन्दुत्वप्रति मेरो आस्था छ केवल राजनीतिकरुपले मात्र आफू सेक्युलर भएको दाबी गरे । राहुलको यो कदमले गुजरातमा मोदीलाई फेरि भाजपा सरकार सत्तामा ल्याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो ।
फेरि कर्नाटका र मध्यप्रदेशमा पनि भाजपाले सरकार बनाउन सकेन । राजस्थान र छतिसगढमा पनि कांग्रेसले जित्यो । कांग्रेसको छवि हिन्दू विरोधी मुस्लिम परस्तजस्तो बनेको थियो, त्यसमा सुधार आयो । त्यो भिन्नै कुरा हो कि त्यसपछिको लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको नतिजा राम्रो आएन । तर, हरियाण, झारखण्डलगायत धेरै प्रदेशमा स्थिति सुधार भयो ।
तसर्थ, अगष्ट ५ को भूमिपुजन तथा राम मन्दिर शिलान्यास कार्यक्रम जस एक्लै भाजपा र नरेन्द्र मोदीलाई दिनु सायद उचित छैन । कांग्रेसको एउटा तप्का जो भन्दैछ कि त्यस अघि नै राहुल गान्धी र उद्धव ठाकरे अयोध्या जानु र पुजा गर्नु उचित हुन्छ, सायद त्यो कांग्रेसको हितमा नै हुन्छ ।
तर, राजनीति कुनै श्वेत श्याम खेल भने हैन । भन्न सकिन्न के हुन्छ ? तर राम मन्दिर मुद्दालाई भाजपाको एकलौटी मुद्दा बन्न दिनु कांग्रेसका हितमा भने नहुने प्रष्ट छ ।
(सत्यहिन्दी डटकम भावानुवाद गरिएको)
ओली नआउने अर्को बैठक बालुवाटारमा कि धुम्बाराहीमा ?
नेकपा बैठकः गुलियो केकबाट बैठक सुरु, तिक्ततापूर्ण संवादबाट अन्त्य
अर्थ / व्यापार, राजनीति, समाचार
चीन र भारतबीच व्यापार सम्बन्धका लागि नेपाल ‘ब्रिज’ बन्न सक्छः डा. महत
नेकपा सचिवालय बैठक पुनः बुधबार बस्नेगरी सकियो
बालुवाटारमा महासचिवलाई जन्मदिनको केक, वामदेवले भने- १०० वर्ष बाँच्नुस्
बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरु
प्रधानमन्त्रीका दुःखः पेरिसडाँडामा भर्‍याङ र धुम्बाराहीमा सुरक्षाको डर, बालुवाटारमा भने बिन्दास !
नेकपा बैठक धुम्बाराहीमा नबस्ने
राजीनामाको माग गर्नु एकताविरोधी गुटगत मानसिकता होः मुख्यमन्त्री पौडेल
बैठकअघि जनार्दनको बोलीले तरङ्ग, महरा पनि सक्रिय
नेकपा नेताहरु ‘तैं चुप मैं चुप’ !
विकसित देशले घुँडा टेके पनि हामीले गर्व गर्न लायक सेवा गरेका छौं : मन्त्री ढकाल
इमरानको अनौठो आरोप- प्रतिपक्षीका कारण कोरोना फैलियो
डा महतको आरोप- काँग्रेसको सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेन
भारत र चीन दुवै देशसँग सम्बन्ध सुमधुर छः सल्लाहकार डा. भट्टराई
पार्टी फुट्छ र ठूलो भाग खान पाउँछु भन्ने नसोचे हुन्छः वरिष्ठ नेता खनाल
राजावादीहरुको काठमाडौंमा शक्तिप्रदर्शन, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउन माग
वामदेवले ईश्वरलाई भने- त्यता तपाईंको भविष्य छैन, हामीतिरै आउनुस्
रोल्पा पुगेर अनन्तले भने- अध्यक्षद्वयले सल्लाह गरून्, युवा सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व लिन तयार छ
बाइडेनद्वारा ह्वाइट हाउसको सञ्चार टोलीमा महिलाहरु नियुक्त
अन्तरसंघर्षले नेकपालाई थप बलियो बनाउँछः वरिष्ठ नेता खनाल
काठमाडौं, १६ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकलाई बालुवाटारबाट...
बाँकेमा दुई समूहबीच झडप हुँदा एकजनाको ज्यान गयो
बाँके, १६ मङ्सिर । बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा सोमबार बेलुका दुई समुहका बीचमा झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना घाइते...
काठमाडौं, १९ मंसिर । बुधबार बोलाइएको नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नहुने...
काठमाडौं, १६ मंसिर । पार्टी कार्यालय र सिंहदरबारलाई एकसाथ बालुवाटार सार्ने अभ्यासलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरुवात गरेका...
नन्दा सिंहसँग लगनगाँठो कस्दै रमेश प्रसाई
काठमाडाैं, १६ मंसिर । प्रखर वक्ता तथा गायक रमेश प्रसाई र नन्दा सिंहबिच विहे हुने भएको छ । ताप्लेजुङ निवासी प्रसाईले कालिकोटकी...
नेपालमा अब खुल्ला कारागार
काठमाडौं, १६ मंसिर । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खुला कारागारको अवधारणामा सहमति जुटेको छ । सोमबार...
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक धुम्बाराहीमा नबस्ने भएको छ । मंगलबार १ बजेका लागि बोलाइएको...
काठमाडौं, १६ मंसिर । सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एउटा अध्यक्षलाई...